HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACO 14-KA AGOOSTO 2019-KA
Wednesday August 14, 2019 - 11:17:05 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXWEYNAHA SOMALILAND IYO WASIIRO KA TIRSAN XUKUUMADDA SOOMAALIYA OO KU KULMAY SACUUDIGA Madaxweynaha Somaliland Muuse Bii xi Cabdi iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumad da Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku kulmay dalka Boqortooyada Sacuudiga C
MADAXWEYNAHA SOMALILAND IYO WASIIRO KA TIRSAN XUKUUMADDA SOOMAALIYA OO KU KULMAY SACUUDIGA Madaxweynaha Somaliland Muuse Bii xi Cabdi iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumad da Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku kulmay dalka Boqortooyada Sacuudiga Ca rabiya, magaalada Mina oo ay u joogaan gudashada waajibaadka Xajka.
Kulankan oo ahaa mid is arag ah ayaa waxaa Madaxwey naha Somaliland ku we hliyay Wasiirkiisa Arrimaha Gudaha Maxa med Kaahin iyo xubno kale, halka Wasiira da ka socday DFS ee ay is arkeen ay kala yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaal iya Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Maaliya dda C/rax maan Ducaale Beyle, Wasiirka Kalluumeysiga C/llaahi Bidhaan, Wasiiro dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha C/ll aahi Xaamud.
2da dhinac ayaa wadajir goob ku taal Mina, waxaana ay isla soo qaadaan xiriir ka iyo walaalt inimada. Wasiiru DFS R/Wa saaraha C/llaahi Xaamud ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo geliyay ku sheegay inay sharaf u aheyd inay la qaxweeyaaan Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi
"Sharaf ayeey ii ahayd in aan Habeenhorela qax weeyno Madaxweynaha Somaliland Muu se Biixi iyo Maxamed Kaahin, Wasiirka Ar rimaha Gudaha, Madaxweyne Biixi waa nin waayo arag ah, yaqaanana qiimaha ay nu isu leenahay, aadna u qaddariya rayiga walaaltinimo.
Fadliga maalmahan barakaysan, iyo dhulkaan barakaysan awgiis Allow kulank eena ka yeel mid barakeysan”ayuu yiri C/llaahi Xaamud.
Kulankan ayaa ah kii u horeeyay oo Ma daxweynaha Somaliland la yeesho Was iiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka, tan iyo markii xilkan loo doortay, sidoo kale wa xaa loo arkaa mid yididiilo leh oo ka qeyb qaad anaya sidii la isku soo dhowaan lah aa oo dib wada hadalada 2da dhinaclo am ba qaadi lahaa.Xigasho:jowhar.com
PUNTLAND OO GACANTA KU DHIGTAY XUBNO SHABAAB AH OO SOO MARAY SOMALILAND
Maamulka Puntland ayaa Shalay sha aciyey inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsanaa kooxda AlShabaab oo soo ma ray deegaano ka tirsan Somaliland, isla markaana u soo gudbayey buuraleyda Ga lgala. Cabdirisaaq Faarax Warsame, Taliy aha Booliska bariga G/Sanaag ee Puntl and ayaa sheegay in ciidamada Booliska Puntland ay gacanta ku dhigeen Rag Alshabaab ka mida ah oo rabay inay galaan Buuraleyda Galgala.
Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu shee gay in Xubnahaasi ka tirsanaa Alshabaab oo tiradoodu dhameyd 5Nin ay soo dhex mareen Magaalooyinka Burco iyo Ceeriga abo oo ka tirsan Somaliland, isla markaa na ay ka imaaden M/Beledweyne.
Taliye C/risaaq ayaa waxa kale oo uu ka dhawaajiyey in ciidamada Puntland ma rkii horeba la socdeen dhaqdhaqaaqa xu bnahan ka tirsan AlShabaab, wuxuuna yiri "Siday noo sheegeen Beledweyn ayay ka yimaaddeen, Gobollada dhexena way u dhasheen”.
"Waxay ka soo gudbeen Galbeedka, wa xay soo mareen Burco, Burco hadday hab eenno joogeena, waxay yimaaddeen Cee rigaabo, Ceerigaabana waxay uga soo gu dbeen Badhan, Badhana waxay uga sii gu dbayeen Buurta Galgala, dabadeedna sid aas ayaanu ula soconay, Ciidammadu isha ayay ku hayeen”.
Wuxuuna intaas kusii daray "Meel Bark ado ku yaallaan oo Dixdhaaxood ka shish aysa oo ah halka ay Buurta ka fuulaan oo ay Waddadu isugu timaaddo ayuu Ciidan ku u sii galay, halkaas ayaa lagu qabtay 5qof iyo Gaadhi Land Cruiser ah oo ay wat een, agabkii Ciidammaduna u saaran yah ay”. "Waxay isku dayeen inay dagaalam aan oo ay baxsadaan, laakiin Nin baa ka dhintay, 4tii kale iyo gaadhigiiba waalla qa btay. Mana dafirin inay Alshabaab ka tirsa naayen oo Welina baadhistu wey soco taa”.
SHIRKA WADATASHIGA WASAARADAHA BOO STADA IYO ISGAARSIINTA FEDERAALKA IYODG/YADA OO KA FURMAY BAYDHABO
Shirka wadatashiga Wasaaradaha Bo ostada iyo Isgaarsiinta ee DFSiyo Dawladgoboleedyada ayaa Shalay ka furmay M/ Baydhabo ee xarunta KMG ah ee DGS ee K/ Galbeed. Shirkan oo looga hadlay doo no qodobo ay ka mid yihiin qiimeynta wax yaabaha ka qabsoomey kulamadii hore ee shirka iyada oo sidoo kale lagu dersi doono caq abadaha jira is la markaana la gu qorsheynayo qodobada mudnaanta iyo muhiimadda ga arka ah u leh dalka gaar ahaan dhinaca Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda, Shirkan ay aa waxaa sidoo kale qorsheysan in lagu soo bandhigo qorshaha xilikordhinta mud ada waxqabadka Mashruuca Taakuleynta Isgaarsiinta iyo Mashruuc ballaaran oo dhi naca tiknolojiyadda ah oo isku xiri doona qaar kamid ah wadamada geeska Afrika gaar ahaan dalalka Itoobiya, Eretereya, Ja buuti, Kenya iyo Dalkeena.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tik nolojiyadda ee Dawladgoboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed M/ Xil dhibaan Mohamednuur Sheekh Cadde, oo soo dhoweeyay kasooqeybgalayaasha ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay in Iagu qabto shirkan oo ah kii 4aad ee ay is ugu yimaadaan wasaaradahan magaalada Baydhabo isaga oo u rajeeyey guul qodo bada iyo ajandayaasha horyaala shirka.
Wasiirrada Boostada iyo Isgaarsiinta ee Puntland iyo HirShabeelle oo hadallo kooban ka jeediyay furitaanka shirka ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka soo qeybgalka kulankan iyaga oo ka mahad celiyey wadashaqeynta dhow ee ay suurto geliyeen kulamada nuucan oo kale ah.
Wasiirudawlaha W/Boostada, Isgaars iinta iyo Teknolojiyada, Md. C/laahi Bile Nu ur, ayaa adkeeyey in Wasaaraddu ay muh iimad gaar ah siineyso talada iyo fikirka wa saaradaha dawladgoboleedyada si loogu wada shaqeeyo qorshe laga wadatasha day.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Tekn olojiyada, Md. Eng. Cabdi Cashuur Xasan, ayaa si kooban uga hadlay waxyaabahii u qabsoomey Wasaaradda muddadan koo ban iyo waxyaabaha laga filanayo gebogebada kulan, isaga oo xusey in ay ka go’antahay Wasaaaradda in ay wadatashi joogto ah iyo xiriir aad u dhow oo wadasha qeeneed la yeelato Wasaaradaha ku ab baaran ee dowlad goboleedyada dalka si loo helo qorshe loo wada dhanyahay, laga tashtay oo dalka gaarsiiyo horumar si gu ud u wada saaameeya.
Ugu dambeyntii Madaxweyanaha Dowl adgoboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Max amed (Laftagareen) ayaa si rasmi ah u fur ay Shirka isaga oo kula dardaarmey ka soo qeyb galayaasha in ay maskaxda shi ilaan kana wadashaqeeyaan sidii loo dar dargelin lahaa qorshayaasha qaran ee la xiriira Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda Dal ka.
Shirkan oo mudo 3 Maalmood ah ka socon doona M/Baydhabo ayaa waxaa ka le oo ka soo qeybgalay ka faa’iideystayaa sha Mashruuca Taakuleynta Isgaarsiinta sida Jaamacadda Ummadda yeed.
PUNTLAND OO WAR KASOO SAARTAY XILDHIBA AADA CUSUB EE JUBALAND LOOGA DHOWA AQAY
Xukuumadda Puntland ayaa u hambaly eysay xildhibaannada cusub ee baarlama nka Jubaland oo Shalay la gu dhaari yay magaalada Kismaayo. Warsaxaafade ed ka soo baxay madaxtoo yada Puntland ayaa sidoo kale lagu bogaadiyay hann aan ka ay ku socoto doorashada madaxti nimada dowlad goboleedka Jubaland, wax aana Puntland ay rajo wanaagsan ka muujisay in doorashada Jubaland ay u dhacdo sida loo qorsheeyay faragelin la’aan.
Waxaa kale oo dowladda Puntland ay guddiga doorashooyinka Jubaland ku dhi irrigelisay in ay doorashada u qabtaan si daahfurnaan ah, ayada oo shacabka iyo dowladda Jubaland ku aShalayy sida isku duubnida leh ee ay uga gudbayaan marxa ladda doorashada iyadoo guul u rajaysay.
Waxaa mar dhow su urtagal ah in laga hortago oo la daawe yo Cudu rka Epola,ka dib markii tijaaboyin la sameeyay ay muuj iyeen horumar macno leh oo la xiriira in 90% ay badb aadin kar aa bukaanada qaba cudurkaasi.
Seynisyahanno ka soo jeeda Marey kanka oo ka socda Machadka qaabilsan cudura da Xasaasiyadda iyo Caabuqa (All ergy and Infectious )ayaa sheegay in tijaa booyin lagu sameeyay daawoyinka REGN EB3 iyo mAb114 la ogaaday in ay awood u leeyihiin difaaca unugyada jirka ee uu haleelo cudurka Epola.
Afar nuuc oo daawooyin ah ayaa lagu tijaabiyay bukanno qaba cudurka Epola oo rer Koongo ah,halkaasi oo ah meeshii uu ka dillaacay cudurkasi,waxaana dib loo dhi gay ama la celiya daawooyinka ZMapp iyo Remdesivir ,ka dib markii la ogaaday in ay ka saameyn yar yihiin tijaabinta daawo oyinka REGNEB3 iyo mAb114 .
Saraakiil xagga Caafimaadka ah ayaa sheegay in daawooyinkaasi ay wax ka tari doonaan cudurka Epola ,isla markaana 90 % ay ku badbaadi doonaan dadka reer Ko ongo ee uu haleelay cudurkaasi.
XILDHIBAANADA CUSUB EE BAARLAMAANKA JUBBALAND OO LA DHAARIYAY IYO NINKA UGU DA’DA WEYN…
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland ayaa Shalay la dhaariyay, ka dib munaasabad ka dhacday M/Kismaayo oo ay goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan 2da Gole ee BF,Guddiga doorashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Munaa sabadda dhaarinta ayaa aheyd mid si toos ah looga daawana yay baraha bulsha da, iyadoo la dhaariy ay 73 Xildhiba an ee Habeenhoreliiskooda la shaaciyay,kuwaasoo koox koox loo dhaar iyay.
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland ayaa 8 ka mid ah waxay yihiin Haween, taasoo ka dhigeysa tiradii ugu ba dneyd ee Haween oo ka soo muuqda Baa rlamaanka Jubbaland.
Guddiga doorashada Jubbaland ayaa sheegay inay soo dhameystirayaan 2xubn ood ee ka dhiman Baarlamaanka, ka dib markii uu dhacay qalad farsamo, lana soo dhameystirayo Baarlamaanka Jubbaland oo tiradiisu tahay 75 Xildhibaan.
Kulankii u horeeyay oo ay yeesheen Xil dhibaanada, kaddib markii la dhaariyay ay aa waxay ninka ugu da’da weyn u doorteen Guddoomiye, inta laga soo doo ranayo Guddoonka cusub ee Baarlamaan ka Jubbaland.
Sheekh Cabdi Yuusuf Cali ayaa loo door tay inuu noqday Guddoomiyaha KMG ee Baarlamaanka Jubbaland, inta laga soo dooranayo Guddoon cusub.
HOGAANKA XISBIGA WADDANI OO KA HADL AY KULANKII DHEX MARAY MUUSE BIIXI IYO XUBNO KA TIRSAN DFS
Guddoomiyaha Xisbiga mucaradka Somaliland C/raxmaan Cirro oo shir jira a’iid u qabtay Suxufiyiinta ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira deegaanada ma amulka Somaliland oo ay ka mid yihiin dag aalo khasaaro geystay oo ka dhacay Ceelafweyne.
Dhinacyada diriraya ay uu ugu baaqay in ay joojiy aan dagaalka aan macna ha badan ku fadhin ee ay ma alin kasta dadka reer Ceel Afweyne ay ku dhamaanay aan. Dhinaca kalana waxa uu soo hadal qaaday kulan kii Sucuudiga ay ku qaate en Madaxweynaha maam ulka Somaliland Mu use Biixi Cabdi xubo ka tirsan golaha was iirada Somaliya iyo wasiiro ka tirsan maamulka Somaliland.
In kasta oo uusan ku dheeraan ka had lka arrintaas ayuu hadana waxa uu u soo qaatay maahmaahda ah "Soomalidu Wa xay Tidhaahdaa Inaad Saamo Jiidiyo San qadh Tirasho Kala Da,aa Markaas Wa xay Ila Tahay Way Cadahay Wax Wal iba…" Ayuu Yidhi Gudoomiye Ciro.
Waxaa Shalay si weyn loo falan qeeyn ay ay sawirro la soo geliayay baraha bul shada isaga oo madaxweynaha Somaliland uu la taaganyahay xubnaha u gu saamayn ta badan Golaha W/DFS.
Maleeshiyada Xuutiyiinta ee dalka Ye men ayaa weerar loo adeegsaday diyaa rad aan duuliye lahayn ku qaaday garoon ka Abha ee koonfurta galbeed ee Sacuudi ga, ee ku dhow xuduudda Yemen, waxaa sidaas Shalay sheegay taleefishinka AlMasirah ee Xuutiyiinta.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga weli kama hadlin weerarkan, islamarkaana sar aakiisha Sacuudiga ayaan si deg deg ah jawaab looga heli karin. Xuutiyita oo ma amula M/caasimadda u ah Yemen ee Sa nca iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhowaa sare u qaday weerarada ay ka fulinayaan bartilmaameedyo ku yaalla gudaha dalka Sacuudiga.
Ayaga oo taas ka jawaabaya, ayaa isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ee dagaalka Yemen waxay beegsadeen go obo militari oo ay kooxdan leedahay, gaar ahaan kuwo ku yaalla agagaarka Sanca.
Weeraradan ayaa sii adkaynaya dadaall ada nabadeed ee QM ay hoggaamineyso.
Isbahaysiga ay hoggaamiyaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo sidoo kale taageero ka hela reer galbeedka, ayaa farogeliyey Ye men sanaddii 2015, si ay isugu dayaan in ay xukunka kusoo celiyaan dowladda Yem en oo xukunka Sanca ay ka tuureen Xuut iyiinta. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 10naan kun, wuxuuna malaayiin reer Yem en ah qarka u saaray macluul. Xigasho: VOA
Madaxweynaha DGJ Md.Axmed Maxa med Islaam ayaa hambalyo u diray Xildhi baanada Baarlamaanka 2da ee Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Madaxweynahu wuxuu xubnahan Cus ub ee kamid noqday Baarlamaanka 2aad ee Jubbaland uu u rajaynayaa in rabi la ga rab galo masuuliyada culus ee dadka ree Jubbaland ay u dhiibteen taas oo ah amaa no culus oo ilaalin iyo ku adeegid mudan.
Dhammaan Shacabka ree Jubbaland ayuu Madaxweynahu ugu baaqay in ay ga rab istaagan mid kamid ah Hay”adahooda Dowliga ah oo ay noqonayso markii 2aad oo dib loo dhiso taas oo wadada u xaadha ysa qaybaha ka dhiman oo ay ku jirto doo rashada G/Baarlamaanka iyo Ma daxwey naha waxaa uu intaas ku daray Madaxwey nahu in ammaanka iyo Midnnimadalaad keeyo oo shacabka ree Jubbaa land ay wadajir kaga gudbaan maalmaha doora shooyinka taas oo raad qurux badan u no qonaysa Dimuqraadiyada iyo Dowladnim ada .Jubaland.
AMISOM OO SHEEGTAY INAY KORDHIN DO ONAAN HAWLGALLADA WADAJIRKA EE KA DHANKA AH ALSHABAAB
Ergayga Gaarka ee Midowga Afrika ugu qaabilsan Arrimaha So maliya, ahna Ma daxa Ha wlgalka AMISOM, Amba ssador Francisco Made ira waxa uu sheegay inay AMISOM iyo Ciiddanka Ammaanka Somaliya xo ojin doonaan Hawlgalla da Millietri ee Wadajirka ee ay ku doonay aan inay la war eegaan Deegaanadda ay ku xooggan yih iin Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
Hadalqoraal oo uu soo saaray Ambas sador Francisco Madeira waxa uu ku muuj iyey in loo baahan yahay Ciiddan Tababar an oo awood u leh inay gacanta ku haya an Deegaanadda ay AMISOM kala waree gaan Alshabaab.
Waxa uu kaloo ka hadlay Xiriirka xoog gan ee u dhexeeya AMISOM iyo Ciiddan ka Ammaanka Somalia, isagoo xusay inay dib u soo celin doonaan Nabadda iyo Am maanka Somalia.
Ergayga Gaarka ee Midowga Afrika u gu qaabilsan Arrimaha Somalia, ahna Ma daxa Hawlgalka AMISOM, Ambassador Francisco Madeira waxa uu ku bogaadiy ey DFS muhiimadda ay siiyeen Jiilka Cus ub ee Ciiddamadda, kuwaasi oo uu tilma amay inay yihiin kuwa weli gacanta ku ha ya 4 Degmo oo lagala wareegay Alshaba ab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Ambassador Francisco Madeira waxa uu tilmaamay inay qaadi do onaan Hawlgalo Milliteri oo Wadajir, bad baadinta Xarumaha bulshadda, nadiifinta Waddooyinka muhiimka ee ay sahayda maraan, kuwaasi oo qeyb muhiim ka ah dhamaystirka Qorshaha Kalaguurka ee Somalia (STP) ee ay AMISOM mas’uuliy adda Ammaanka ku wareejin doonaan Cii ddanka Ammaanka Somalia.
ODAYGII UGU NASIIBKA BADNAA! OO XAJKA NASIIB U HELAY!!!
Sawirka aad aragtaan waa nin oday faqiir ah oo ku noolaa dalka #Ghana waxaana la gu magacaaba Xasan Cabdu llahi. Tvga ca anka ah ee #TRT ee laga leeyahay dal ka Turkiga ayaa barnaam ij filim a ka diyaari naayay tuulo ku taalo dalka Ghana oo ay muslim iintu ku badanyi hiin, balse kaamirada duu sha ee loo yaqa ano (drone), ayaa ka lunt ay wariyaashii.
Kadib waxay baadigoob u galeen si dee ku heli lahaayeen, sidee baadigoob ka ugu jireen ayee waxay arkeen nin oday ah oo gacanta ku haayo oo la yaaban wax aan yar oo duulaayo!
Odaygii ayaa su’aal weydiiyay sawir war iyaashii Turkida ahaa ” Diyaaradaan yar xajka ma ku tagi karaa?””!!!! Wariyaashii Turkida ayaa la yaabay su’aashiisa waxay na ku dareen muqaalka barnaamijkooda.
maalmo kadib wuxuu barnaamijkii ku baa hiyay baraha bulshada nasiib wanaag sac ad kadib Madaxweyne Erdogan oo daawa day barnaamijka ayaa la xiriiray safaarada Turkiga ee Ghana wuxuuna ku amray inee bilaabaan siduu ninkaasi ku tagi lahaa Xajka.
Waa kaas odey Xasan Cabdullahi. Wa a uu xajiyey wuxuuna hada joogaa M/ Bar akaysan Makkah.. Ogoow waxaad si qaa lis ah ugu niyooto in Alle ku fududeenaayo oo adoomadiisa ku soo diraaya.
•Alle haka aqbalo oday Xasan Cabdillahi.
• Alle haka ajarsiiyo Madaxweyne Erdogan iyo dowlada Turkiga.
Dowladda Mareykanka ayaa Shalay sheegtay inay dib u dhigeyso ilaa 15ka bi sha December, soo rogista canshuur cu sub oo 10% ah oo la saari lahaa badeec adaha elektaroonika ee Shiinaha.
Si kastaba, Mareykanka waxa uu she egay inaysan waxba iska beddeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado Shiinaha ka yimaada oo qiimahooda dhan yahay 300 oo bilyan dollar, taasi oo dhaq angeleysa 1da September. Ayada oo Washington iyo Beijing ay ka shaqeynaya an xal u helista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya, ayaa wakiilka gacansiga ee Mareykanka, Robert Lighthizer waxa uu Shalay la hadlay ra’iisul wasaare kuxige enka Shiinaha Liu He, waxaana la qorshe eyey in laba toddobaad kadib uu sidoo kale taleefon kula hadlo mar kale.
Wareeggii ugu dambeeyey canshuura ha, oo madaxweynaha Mareykanka Don ald Trump uu ku dhowaaqay 1dii August, ayaa waxa uu macnaheedu yahay in dha mmaan badeecadaha Shiinaha uu usoo dhoofiyo Mareykanak ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah.
Trump ayaa Shalay ku eedeeyey Bei jing inay ka leexleexaneyso ballanteeda ah inay iibsaneyso wax soo saarka beera ha Mareykanka
AKHRISO: MUSHARAXIINTA JUBBALAND OO KU DHAWAAQAY XILDHIBAANO CUSUB
Musharaxiinta u taagan qabashada xil ka madaxweynaha maamulka Jubba land ayaa soo saaray Liiska xildhibaano cusub oo ka soo hor jeeda kuwii Habeenhoreay ku dha waaqeen guddiga doorashooyinka maam ulka Jubbaland.
Murashaxiintu waxa ay ku dhawaaqe en xildhibaano ka kooban 75xildhibaan kuwa as oo ay sheegeen inay yihiin xildhi baannada saxda ah ee maamulkaas waxa ana sii kor dhaya khilaafka u dhaxeeya gu ddiga doorashooyinka iyo musharaxiinta.
Guddiga doorshooyinka ayaa Habeenhoresoo saaray liiska xildhibaanada baarlama anka 2aad ee Jubbaland kana kooban 75 hase’ahate waxa guddigu sheegay inay harsanyihiin 2l Mudane oo sababo farsa mo dartood aan loo soo magacaabin.
XISBIYADA UPD, WADAJIR IYO HIMILO QAR AN OO TAAGEERAY MID KA MID AH LABA DA LIIS XILDHIBAANNO EE JUBALAND
Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ay aa taageeray xildhibaannada cusub ee ba arla manka Jubaland Shalay loo dhaari yey, ayaga oo soo saaray warsaxaaafde edyo kala duwan.
Xisbiga uu hoggaamiyo Xasan Sh. Maxamuud ee UPD, kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee Wadajir iyo midka Shariif Sh.Axmed ee Himilo Qaran, ayaa dham maantood taageeray xildhibaanada ay dha ariyeen guddiga doorashada ee uu mag acaabay madaxweyne Axmed Mad oobe.
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumar ka (UPD) wuxuu u hambalyeynayaa xildhi ba anada cusub ee dawlad goboleedka Ju bal and ee maantey lagu dhaariyey. M/ Kis maayo caasimadda KMG ee DG Jubal and, tallaabadaas oo aheyd mid horey loo qaadey Isla markaana bilow u ah in doora shada hey’adaha dastuuriga ee Jubaland ay waqtigeedii ku qabsoonto.
Waxaa sidoo kale xisbiga UPD uu bo gaad inayaa hawsha ballaaran ee illaa iyo had da ay qabteen Guddiga Doorashooyin ka iyo Xuduudaha Jubaland iyo sida ay u ga dhabeeyeen jadwalkii ay horey u de gsad een ee tilmaamayey geedisocodka door ashooyinka hey’adaha dast uuriga ah ee Jubaland.
Xisbiga UPD oo cuskanaya qodobka 120aad ee dastuurka dalka ee qeexaya in dhismaha goleyaasha sharcidejinta iyo fuli nta ee Dawlad Goboleedyadu ay yihiin aw ood u gaar ah dowlad goboleedka, laguna nidaaminayo si waafaqsan Dastuurada Ma amul Goboleedyada, waxaan madaxda DFS iyo laamaha amniga uga baaqaynaa inay dhowraan dastuurka dalka, kana digt oonaadaan faragalin toos ah iyo mid dadb an intaba, taa soo horseeda karta xasiloo ni darro ka dhacda deegaanadaas oo fur sad siisa kooxaha argagixisada ah.
Xisbiga Himilo Qaran wuxuu soo dha weynayaa liiska xubnaha cusub ee Baa rla maanka Jubbaland ee uu ku dhawaaqay Gu ddiga Xudduudaha iyo Doorashooyin ka Ju bbaland taariikhdu markay aheyd 12/08/2019. Xisbigu wuxuu bogaadinayaa shaqada ay qabteen Guddiga Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland, iyadoo Xis bigu ku baa qayo in doorashada Guddoon ka Baarlam anka iyo Madaxweynaha loo qabto si huf an oo nabad gelyo ah.
Xisbigu wuxuu sidoo kale DFS ugu ba aqayaa haddii aysan waxba ku soo kor dhin karin habsami u socodka doorasho oyinka ka socda Jubbaland in aysan carqa ladayn, kana fogaato wax kasta oo shac abka reer Jubaland u horseedi kara dhiba ato iyo burbur, iyadoo laga fakarayo dano gaar ah oo aan u adeegayn bulshada ku dhaqan Jubbaland iyo guud ahaan Sha cabka Soomaaliyeed.
Ugu danbeyn Xisbiga Himilo Qaran wux uu shacabka iyo mas’uuliyiinta Jubbal and ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan Xasil loonida iyo amniga Jubbaland, meel na uga soo wada jeestaan wax kasta oo bul shada reer Jubbaland u horseedi kara dhi baato iyo dhiig la daadiyo .
GUDDIGA DIB U HESHIISIINTA GALMUDUG OO QODOBO CULUS KA SOO SAARAY SHIRKA DHUUSAMAREEB
Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ay aa soo saaray habraaca shiweynaha la fil ayo in 17ka bishan uu ka furmo magaala da Dhuusamareeb ee xarunta maamulka asi.
Xubnaha guddiga oo shir ku yeeshay magaaladaasi ayaa soo bandhigay illaa shan qodob oo uu ku qabsoomi kari shirka asi. Qodobada ay soo saareen xunahag ud diga ayaa kala ah: Bilawga soo dhawe ynta iyo Qaabilaadda Ergooyinka ka qeybgalayaasha Shirka. Hubinta iyo Kormeeri dda Goobaha Shirka iyo Deega anka Ergo oyinka. Diyaarinta Ajandaha iyo Agabyada Shirka. Wargelinta iyo Diyaargarowga Ha y’ada ha Amniga iyo Wasaar adda Arrima ha Gud aha Federaalka.Xadeynta Waqtiga soo gaaridda Ergooyin ka Goobta Shirka oo ah: 14 – 16 Bishaan iyo Furitaan ka Shirka oo ah: 17 ka Bishan.
Shirkan ayaa muhiim u ah Galmudug oo dhowaan galeyso doorashada madaxw eynha iyo mida baarlamaanka ee maamul kaasi. Xigasho:Caasimada Online
XUBNO KA TIRSAN G/BANAADIR OO LA CIIDAY CARUURTA MASUULIYIINTII KU DHIM ATAY QARAXII KA DHACAY XARUNTA G/B
Siihayaha guddoomiyaha gobolka Bana adir ahna gudoomiye kuxigeenka maamulka iyo maaliy adda gobolka Banaa dir Md. Ibraahim Cum ar MahadAlla (Ibr aa him Dheere) iyo gudd oomiye kuxige enka arimaha bulshada gobolka Banaadir Bas ma Caamir Jaketti ayaa Shalay xarunta gurya Samo kula ciidestay caruurta agoon ta ah oo ay ka baxeen madaxii iyo howl wadeenadii ku shahiiday iyagoo u adee gaya qarankooda.
Goobta ay masuuliyiintan caruurta ago onta ah farxada ciida kula qaadanayay ay aa waxaa goob joog ka ahaa qaar kamid waalidiinta iyo ehelada marxuumiinta sha hiiday. Siihayaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye kuxigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Ban aadir mudane Ibraahim Cumar MahadAl la (Ibraahim Dheere) oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in caruurta agoonta ay nooga baahan yihiin naxariis iyo garab ist aag dhab ah si mustaqbalka dhaw ay noq daan kuwa qarankooda iyo nolashooda anfaca.
SHEIKH SHAAKIR OO SHIR XASAASI AH LA YEESHAY SHARAAKIISHA CIIDAMADA
Madaxa xukuumada Maamulka Galm udug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa Shalay Magalada Dhuusamareeb ee Xar unta Maamulka Galmudug waxaa uu ku la kulamay Saraakiisha Ciidanka qeybahoo da kala duwan.
Kulanka ayaa waxaa uu ahaa mid xogwareysi ah,isla markaana lagu gorfeeyay arrimo la xiriira dhnaka sugdai Amniga ma adaama dhawaan Magalada Dhuusamare eb lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug.
Sheekh Shaakir ayaa saraakiisha uu la kulmay oo kala ahaa kuwa Millateriga iyo Booliska waxaa uu faray inay laba jibaara an sugiuda Amniga,sidoo kalena ay u diy aar garoobaan dagaal ka dhan ah AlShab aab,kaas oo looga saarayo deegaannada
ay ka joogaan Galmudug.
PRIYANKA CHOPRA OO EEDEYN KALA KULAN TAY FARRIIN AY CIIDANKA HINDIYA KU TAAGE ERTAY
Priyanka Chopra waxay jishay aflaan Bollywood iyo Hollywood ah. Atariisho u dhal atay Hindiya, Priyanka Chopra ayaa lagu dhall eeceeyay inay dagaal dhiiragelineyso ka dib markii ay Twitterka ku qortay inay taageereyso militariga Hindiya xilli xii sadda Pakistan kala dhexeysay ay cirka isku sii shareereysay.
Haweeney haysata dhalaashada Mareyk anka, asal ahaanna ka soo jeeda Pakistan ayaa ku tilmaamtay Chopra "munaafaq", ta as oo ka qeybgaliysay shirka quruxda ee Chopra lagu martiqaaday ee ka dhacay Los Angles.
Atariishada ayaa Bishii February qortay: "Jai Hind #IndianArmedForces", Taas oo mi cneheedu yahay Hindiya Ha Noolaato.
Xilligaas, dalka deriska la ah ee Nukliyerka haysta waxaa Hindiya kala dhexeeyay xiisad si degdeg ah u sii xumaaneysay oo daanda ansi militari uu qeyb ka ahaa. Dhammadkii is buucii tagay, Chopra oo saaran masraxa Be autycon, oo ah shir bandhig, ayey haweeney da Amerikaanka ah ee asal ahaan ka soo je eda Pakistan, Ayesha Malik oo qeyb ka aha yd dhageystayaasha ay su'aal ka weydiisay arrintaas.
"Waxay la mid tahay inay wax adag tahay in la dhageysto adiga oo ka hadlaya biniaad amnimo, sababtoo ah, deris ahaan, Pakist ani ahaan, waan ogahay in xoogaa munaaf aqnimo kaa muuqato," ayey tiri Ayesha Mal ik,taas oo muuqaalka arrintaas ku daabac day boggeeda Twitterka.
Waxay soo qaadatay farriintii Chopra ee bishii February waxayna tiri: "Waxaa tahay safiirka UNICEF ee nabadda, waxaadna dhii ragelineysaa dagaal nukliyer oo ka dhan ah Pakistan. Qofna kuma guuleysanayo taa." ka dib mikrafoonka ayaa laga qaaday Ms Malik si aysan hadalka usii wadin.
Chopra, oo UNICEF u ahayd safiirka wan aagga tan iyo 2016kii, ayaa ku jawaabtay in saaxiibo badan oo reer Pakistan ah ay leeda hay, aysanna jecleyn dagaal balse ay ahayd wadaniyad. Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @priyankachopra